ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကျပ်သိန်းပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ကုန်ကျခံရိုက်ကူးထားတယ်လို့ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်ဆို
ပါမောက္ခဒေါက်တာ အသည်းခင်မောင်ဝင်း၏ ဝတ္ထု ထာဝရအမေ ကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ်ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သော ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က ကုန်ကျငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း သုံးထောင်ကျော် ကုန်ကျခံရိုက်ကူးထားကြောင်းပြောသည်။
” ဒီကာဒမရိုက်ခင်မှာ ကျွန်တော် ဆရာကြီးကို ကတိပေးခဲ့တယ်။ ဒီကားက ငွေရေးကြေးရေးတော့ မသိဘူး အနုပညာအရ အမေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေ ပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ဖို့ ဒီကားကြီးက ကမ္ဘာတည်သရွေ့ကျွန်တော်တို့ မ၇ှိလည်း ရှိနေဖို့ ကျွနတော်ကတိပေးပြိးရိုက်ခဲ့တာပါ. ဒီကားမအောင်မြင်ရင်က ျွန်တော် အနုပညာလောက ထွက်သွားမယ်လို့ဆရာကြီးကို ကျွန်တော် စိန်ခေါ်ပြီးရိုက်ခဲ့တယ်။ သူများတွေ သိန်း တစ်ထောင် ထောင့်ငါးရာ ရိုက်နေတဲ့ချိန်မှာ သိန်း ၂၈၀၀ ကုန်နေပြီ။ ရုံတင်တာမပါသေးဘူး ။ရုံတင်မယ်ဆိုရင် သိန်းသုံးထောင်ကျော်သွားပြီ. ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဆရာကြီး စေတနာအကျိုးပေးမှာပါ။ ” ဟု စင်ရော်မောင်မောင်ကပြောသည်။
ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးသည် ပါမောက္ခဒေါက်တာ အသည်းခင်မောင်ဝင်း၏ ဘဝအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး မိခင်တစ်ယောက်၏မေတ္တာကိုဖော်ကျူးရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်ကားတွင် ဆရာကြီး ခင်မောင်ဝင်းနေရာတွင် သရုပ်ဆောင်နေတိုး၊ ဆရာကြီး၏ မိခင်နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုနှင့် ဆရာကြီးဇနီးနေရာတွင် သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့က ပါဝင်ထားကြကြောင်း သိရသည်။
” ဘယ်တုန်းက မှ အမေ့အတွက်ဆိုရင်ဘာကိုမှ မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ အမေက ကိုယ့်ဆီက ဘာမှ မယူသွားဘူး။ သူကပဲအကုန်လုပ်ပေးသွားတာ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီဝတ္ထုရေးတာ ရုပ်ရှင်ရီုက်တာ ဒါအမေ့အတွက်ပဲ အမေ့ကျေးဇူးဆပ်နေတာပဲဆိုပြီး အတွေးက၇ှိတော့ ဘာမှကိုမတွက်ဘူး။ တစ်ယေက်က ပြောတယ်။ ဆရာ စာရင်းဇယားတွေကို မစစ်ဘူးလား ။ ကုမဏီထောင်ထားလား။ ဘာမှ မထောင်ထားပါဘူး။ ကိုမောင်တောင်းသမျှကိုလည်း တစက်မှ မတွက်ဘဲ နဲ့ပေါ့ တကယ်စာရင်းတွက်ရင်တေ့ာ သိန်းသုံးထောင်တော့ကျော်သွားပြီ။ ဒါက အမေ့အတွက်ပဲ ။ အမေ့ကျေးဇူးကိုဆပ်နိုင်သရွေ့ဆပ်မယ်။ အမေ့ကျေးဇူးကတော့ ဘယ်တော့မှဆပ်လို့ မကုန်တော့ဘူး။ အမေ့ကိုစဉ်းစားပြီး ဘာစာရင်းကိုမှ မတွက်တော့ဘူး။ ” ဟု ဆရာကြီး ခင်မောင်ဝင်းကပြောသည်။
ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိခင်ကိုချစ်သော ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်သော သားကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးနှင့် မိခင်စိတ် အပြည့်အ၀ ၇ှိသော အမေများလည်း ပိုမိုပေါ်ထွန်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားကို ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့မှ စတင်ကာရုံတင်ပြသတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရရှိလာသော ဘဏ္ဍာငွေကို “မုဆိုးမသား စီမံကိန်းပုံစံမျိုး”ဖြင့် အသုံးပြုနေသည်ဟု ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးလာမည့် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူများ စားစရိတ်တိုးမြှင့်